【HOT】Nên trồng cây ăn quả gì trong vườn nhà phố nhỏ, lại dễ chăm sóc? | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Đang Đọc: 【HOT】Nên trồng cây ăn quả gì trong vườn nhà phố nhỏ, lại dễ chăm sóc? | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
Indlu yedolophu enegadi yeziqhamo ejingayo ejikeleze indlu iya kuba yindawo emangalisayo, ekhethekileyo esixekweni, imvakalelo yokuba sihlala negadi eluhlaza, ukuba kufutshane nendalo kunomdla kakhulu. Ngoko ke yeyiphi imithi yeziqhamo ekufuneka ityalwe kwigadi yasekhaya?
Yeyiphi imithi yeziqhamo ekufuneka ityalwe kwigadi yasekhaya ekulula ukuyikhulisa kwaye ithatha indawo encinci? Yaye yintoni efanele iqatshelwe xa ukhulisa imithi yeziqhamo kwigadi yasekhaya?
Namhlanje, esi sixeko sixinene ngakumbi. Imeko yomhlaba oxineneyo ayisengomnqa, ngoko ke ukuba nendlu enegadi yesintu kubonakala kunzima kakhulu. Ngoko ke, ukuze bakwazi ukuziqhelanisa, abantu abaninzi baye bakhetha imithi yeziqhamo engadingi ndawo ininzi yokutyala okanye isebenzise ithuba leterrace.
Enye indlela entsha kukukhulisa izityalo kwiimbiza, kwi trellises. Oku kusebenzisa yonke indawo enokwenzeka yokukhulisa iziqhamo. Oku kuthathwa njengesisombululo esikhulu onokuthi ubhekisele kuso. (Jonga iinkcukacha: Igadi yeziqhamo eluphahleni – eVNexpress okanye kusapho)
Ukuba ugqibile ukubhekisa kwiindlela ezintsha zokutyala, makhe sibhekisele kwimithi yeziqhamo engadingi mhlaba mninzi okanye ekulula ukuyikhulisa, ilungele igadi yakho.
1 Yiyiphi imithi yeziqhamo ekufuneka ityalwe kumyezo wendlu encinci yedolophu?
1.1 1. Umthi werharnati
1.2 2. Umthi wesele waseThai
1.3 3. Umthi we-apile
1.4 4. Umthi weziqhamo zedragoni
1.5 5. Umthi wegwava
1.6 6. Umthi welamuni
1.7 7. Umthi wephayinaphu
1.8 9. Umthi weziqhamo zeenkwenkwezi
2 Imithi yeziqhamo eyi-11 ephezulu egayiweyo ekulula ukuyikhulisa egadini
2.1 1. Thai jackfruit
2.2 2. Umthi weavokhado oyimbiza
2.3 3. Umthi wegwava
2.4 4. Umthi webhanana
2.5 5. Ivatala
2.6 6. Umthi wePlum
2.7 7. Umthi wamapere
2.8 8. Umthi wemango
2.9 9. Umthi weGrapefruit
2.10 10. Iidiliya
2.11 11. Umthi omde
3 Amanqaku xa ukhulisa imithi yeziqhamo kwigadi yasekhaya
Yiyiphi imithi yeziqhamo ekufuneka ityalwe kumyezo wendlu encinci yedolophu?
Yeyiphi imithi yeziqhamo ekufuneka ityalwe kwigadi yasekhaya? Jonga ithala elizele yimithi yeziqhamo encomekayo (Apha)
1. Umthi werharnati
Ngexeshana nje elincinane lokukhathalela nokulima, unembiza echumileyo yerharnati. Okwangoku kwiimarike kukho iindidi ezimbalwa ezahlukeneyo zerharnati, kulula ukuba ukhethe.
Ukuba ufuna iirharnati zikhawuleze zithwale iziqhamo, kufuneka ukhethe ukuthenga izithole endaweni yokukhula kwimbewu! Ukongezelela, iirharnati ezikhulayo zizisa ezininzi iintsingiselo ze-feng shui ezithandwa kakhulu kumakhaya amaninzi.
2. Umthi wesele waseThai
Isele laseThai sisiqhamo esincinci ngokwentelekiso, esinomuncu, crispy, incasa ethambileyo, ngakumbi amaxoxo amancinci. Isityalo esincinci, kulula ukukhula, ungakhula kwisitya se-foam kanye ekhaya. Ukukhulisa i-Toad yaseThai kulula kakhulu, kunye nezinambuzane ezimbalwa kunye nezifo, iintsapho ezininzi ziyakuthanda ukuyikhulisa kwibhokisi ye-foam ekhaya.
Ngalo lonke ixesha uvelisa isiqhamo, umthi uzele ziziqhamo, nto leyo eyenza umntu abe novuyo. Sinokusebenzisa amaqabunga amancinci amuncu kunye anomuncu we-toad ukuba atye kunye nemifuno eluhlaza, efanelekileyo kakhulu! Inzuzo yesele yaseThai kukuba emva kokukha isiqhamo, nqumla isebe elidala kwaye umthi uya kuvelisa amathupha amatsha kwaye uqhubeke nokuvelisa iintyatyambo. Okukhona isele likhulile, kokukhona liya kuba lingalunganga ngakumbi.
3. Umthi we-apile
Ukuba uceba ukukhulisa imithi yama-apile kwisitiya sakho, khumbula ukuyityala kwiimbewu! Esi sisityalo esifuna eyona nkathalo kunye nesichumiso.
Iapile linika isivuno esiphezulu kakhulu kodwa kuxhomekeke ngokupheleleyo kwisixa sesichumiso esisinika sona. Kufuneka uchume ngokupheleleyo, ugrumbe imingxuma enzulu nebanzi ukugcina izondlo. Iingcambu ze-apula zikhula kakuhle, zinokutya amaxesha ama-5-6 ububanzi be-canopy kwaye ukuya kwi-1.5m ubunzulu. Xa ii-apile zivelisa iziqhamo, kuyimfuneko ukwandisa isichumisi somthi.
Abantu abaninzi bathanda ukudlala ngemithi yama-apile enokwenza iimilo ezintle. Ama-apile angakhuliswa unyaka wonke, kodwa angcono ukutyalwa ekwindla nasentlakohlaza eMntla nasekuqaleni kwexesha lemvula eMzantsi.
4. Umthi weziqhamo zedragoni
I-Dragon fruit ifanelekile kwimozulu eshushu nenelanga, inokunyamezela imbalela kodwa iingcambu akufunekanga zibemanzi kakhulu. Ungayikhulisa imithi yedragon fruit kanye kwikhaya lakho ngembewu yedragon fruit ethatyathwe kwisiqhamo.
Njengesityalo esinyukayo, sinokuyityala ecaleni kweentsika zesamente okanye sivumele ukuba sikhwele kwiintsika zesango lakho okanye ucingo. Akufuneki sichithe ixesha lokunkcenkceshela izityalo yonke imihla, ngakumbi iintyatyambo zedragon fruit ziyadubula kwaye zisasazeke kakuhle, zenza ubuhle begadi yakho.
5. Umthi wegwava
Nangona isisityalo esingakhethiyo emhlabeni, kungcono ukutyala igwava ngomhlaba oxekileyo, onomoya, ongenamanzi kwaye nogcina ukufuma. Ngoko ke ungatyala ngokukhululekileyo iintlobo ezininzi ezizithandayo zegwava kunye nesixa esingalunganga sesiqhamo kwisiseko somthi.
Izityalo zinokukhuliswa ezimbizeni, nokuba umhlaba egadini mkhulu, akuyongxaki ukutyala iingcambu ezininzi ngaphandle!
6. Umthi welamuni
I-Lemon sisityalo ekulula ukukhula, kulula ukusinyamekela kwaye kulula ukufumana iintlobo ezininzi ze-lemon ezilungileyo, ngoko ke ithandwa kakhulu egadini, ayiyi kuthatha indawo eninzi kwiyadi yakho.
Ukongeza kokutyala ukwenza indawo entle, lo mthi ukwanamandla okunceda abasetyhini ukuba bahombise, bakhuthaze ukusetyenziswa kwayo ekhitshini, ukucoca indlu, iilamuni ezintsha nazo zinezibonelelo ezininzi zempilo. Ngoko ke, ukutyala imithi yelamuni kuthathwa njengokhetho lobulumko.
7. Umthi wephayinaphu
Uninzi lwenu lothuka kakhulu xa esi siqhamo sikuluhlu. Iphayinapile sisiqhamo esimnandi esithandwa ngabantu abaninzi ehlotyeni. Lo mthi awupheleli nje ekukhuliseni isiqhamo kodwa ukhuliswa njengento yokuhombisa ngenxa yembonakalo yawo entle, engaqhelekanga nenomtsalane emehlweni. Uninzi lwezindlu zasedolophini ngoku zityekele ekukhuliseni amapayinapile njengezityalo zokuhombisa iigadi zabo.
Xa kutyalwa, abantu abaninzi baya kucinga ukuba esi sisityalo esinzima ukukhula, kodwa eneneni esi sityalo kulula ukusikhulisa kwaye asikhathali kakhulu. Imithi yephayinapile ikhula ngokukhawuleza phantsi kwemozulu enokukhanya okwaneleyo, ubushushu, ukuchumisa kunye nokubonelela ngesondlo esaneleyo.
9. Umthi weziqhamo zeenkwenkwezi
Iziqhamo ezimuncu zeenkwenkwezi okanye iziqhamo zeenkwenkwezi eziswiti zombini zizityalo ezizithandayo zokuhombisa. Ngokukodwa abaninzi “abatyali” banokudala iimilo ezininzi ezizodwa kunye nezikhundla, ukwandisa ubuhle begadi yendlu.
Imithi yeziqhamo ezinkwenkwezi inobubanzi obuyi 10cm ukuya kwi 20cm, ilungele iigadi ezincinci kwizindlu zasedolophini. Imithi yeziqhamo ezinkulu zeenkwenkwezi, ukusuka kwi-20 ukuya kwi-30 cm okanye ngaphezulu kwe-30 cm, zihlala zifanelekile ukukhula kwii-villas kunye negadi ezifuna ukutyalwa ukuba zibe nemithi ye-landscape eluhlaza kwangoko.
Inkwenkwezi yeziqhamo ayikuthandi ukukhanya okuthe ngqo, ngakumbi isiqhamo esiswiti siyawuthanda umthunzi, ngoko ke kuhle kakhulu ukudibanisa iziqhamo zeenkwenkwezi kwigadi enemithi emide, ukuthintela ukukhanya kwelanga.
Ukongezelela kwimithi yeziqhamo, ngokuqinisekileyo umyezo uya kuba mhle ngakumbi ukuba uhonjisiwe Iintyatyambo ezikhula lula egadini okanye Zeziphi izityalo ekufuneka zilinywe egadini?. Ke ngoko, kuya kufuneka udibanise imithi yeziqhamo, iintyatyambo kunye nezityalo zokuhombisa ukwenza isitiya sakho sibe luncedo kwaye sihle!
Imithi yeziqhamo eyi-11 ephezulu egayiweyo ekulula ukuyikhulisa egadini
Imithi yeziqhamo kulula ukukhula ekhaya, igadi encinci, unokuzikhulisa ngokwakho kwaye unakekele imithi ngokulula, kuba uhlobo lwale mithi esiludwelisa lunamandla amakhulu, lunokumelana nemozulu embi kakhulu.
1. Thai jackfruit
I-Super early Thai jackfruit ludidi lwejackfruit lwangaphandle olwaziswa eVietnam ngendlela ephathwayo kwaye ityalwe iminyaka eliqela ngoku ngenzuzo yexesha lokuvuna olukhawulezayo ukusuka kwiinyanga ezili-12 ukuya kwezili-15 kuphela emva kokutyala, inejusi kunye nepulp eswiti. Umthi weziqhamo onengqiqo kakhulu kwi-styrofoam kunye nezityalo ezifakwe kwiimbiza.
2. Umthi weavokhado oyimbiza
Iavokhado sisiqhamo esisempilweni. Ukutya iiavokhado kunceda ekunciphiseni umngcipheko wesifo sentliziyo, isifo seswekile kunye nokutyeba ngokugqithiseleyo, zixhasa ukwehla kobunzima bomzimba, zonyusa amandla, kwaye zilungele iinwele nolusu. Endaweni yokuchitha imali ephaketheni lakho ukuze uthenge iiavokhado ukuze uzitye, ukuzikhulisela imithi embalwa yeeavokhado ngokwakho ekhaya kukunceda wonge imali ngelixa unomthi omncinci omhle njengomhombiso. Ndisandula ukufumana isiqhamo sokutya.
3. Umthi wegwava
I-guava ayisosiqhamo nje esimnandi. Olu lukhetho oluhle kuye nabani na ofuna ukuba nomthi weziqhamo wangaphakathi kwaye ngoyena mthi weziqhamo kulula ukuwukhulisa. .
Zininzi iindidi ezifana neeguava zaseTaiwan, iguava emfusa, igwava yaseJapan, iguava engenambewu… Iguava ngokubanzi ayikhethi cala emhlabeni, kodwa ngenxa yokuba ikhuliswe embizeni, kufuneka kuqatshelwe ukukhetha umhlaba oxekexekileyo, otsalwe kakuhle. .
4. Umthi webhanana
Iibhanana azinikeli abalimi kuphela isiqhamo esinesondlo, kodwa kunye nesityalo esihombise kakhulu. Iibhanana zizityalo ezikwiitropikhi ngoko ke ziyahlukahlukana, ubushushu kunye nokufuma.
Iivatala ezineziqhamo ezincinci kulula ukukhula kwiimbiza. Ekuphela kwento oyifunayo ngumdiliya wenkxaso, uyilo olulula kunye nokunkcenkceshela ngamaxesha athile, ukongeza kwiphayinaphu esembizeni, ivatala ikwangumthi weziqhamo okhuliswe kwibhokisi yogwebu esengqiqweni.
6. Umthi wePlum
IPlum ngumthi weziqhamo okhuliswa kwiindawo ezininzi zehlabathi. Kwiindawo zasezidolophini ezinkulu njengeSixeko saseHo Chi Minh, imithi yeplum kulula ukukhula njengezityalo zokuhombisa. Iintyatyambo kunye namagqabi anevumba elimnandi.
7. Umthi wamapere
Ipere sisiqhamo esiqhelekileyo kumntu wonke. Ayizoziqhamo ezimnandi kuphela, ezingaqhelekanga nazo zinezinye izibonelelo ezininzi. Ngaphezu koko, iindlela ezilungileyo zokutyala zilula kwisivuno esikhulu.
8. Umthi wemango
Kulula kakhulu ukukhula, kuthatha iminyaka emi-3-5 ukuthwala isiqhamo, kukho iintlobo ezininzi zemango ezilungele iinjongo zokuhombisa, ngakumbi amagqabi amancinane emango anokutyiwa neminye imifuno nawo amnandi kakhulu.
9. Umthi weGrapefruit
I-Grapefruit mhlawumbi sesona siqhamo siqhelekileyo kuthi, ibonelela ngomthombo omkhulu wezondlo zomzimba ezifana namanzi, ifayibha, iivithamini kwiiorenji. I-Grapefruit peel inokwenza i-oyile ebalulekileyo ibe nevumba elimnandi kwaye ibe luncedo empilweni.
Imithi ye-Grapefruit ifana ne-orenji, ukuyikhulisa kulula kakhulu. Okokuqala siya kuhlwayela imbewu embizeni ukudala ukufuma ukuze izityalo zihlume ngokukhawuleza, amanzi rhoqo yonke imihla ukuze izityalo zikhule ngokukhawuleza kwaye zivelise iziqhamo ezininzi ezisemgangathweni.
Nangona imidiliya ingekho nzima ukuyikhulisa, uya kujongana nokhuphiswano oluqatha ngexesha lokuvuna kwiintaka nezinye izilwanyana. Ngaphezu koko, iidiliya zidinga uhlobo oluthile lwe-rig okanye i-rack ukuze zikhule. Kukho neengcebiso ezininzi malunga nendlela yokuthena, kodwa abantu abaninzi bazikhulise ngempumelelo ngokuthenwa okukhululekileyo.
Jonga kwiofisi yakho yolwandiso lwendawo ukuze ufunde ngezona ntlobo zediliya zibalaseleyo kwindawo yakho. Kwaye qiniseka ukuba uqaphela ukuba zeziphi ezilungele ukutya okanye ukwenza iwayini. Uninzi lweendidi zediliya zidinga indawo enelanga, umhlaba otyebileyo ngezondlo okhupha amanzi kunye nokuhamba komoya ukuthintela izifo.
11. Umthi omde
I-Longan kukutya okuqulethe i-Vitamin C eninzi. Ukutya i-longan ilungile kakhulu empilweni, i-longan isinceda ukuba sinciphise uxinzelelo kunye nokudinwa xa usebenza imini yonke, ukutya i-longan kunceda ukukhulula ingqondo. Ukongeza, i-longan iphinda iphucule i-iron kumzimba wethu, kodwa qaphela ukuba ungatyi kakhulu kuba iya kuba shushu kunye ne-acne, ubushushu bomlomo.
Umthi weLongan ngumthi weziqhamo ekulula ukuwukhulisa, udinga nje ukutyala imbewu ye-longan emhlabeni kwaye unkcenkceshele ngokufuma okuthile, umthi uya kuhluma ngokukhawuleza. ngakumbi umthi we-longan unokumelana okuphezulu kakhulu, phantse akukho ntshulube yeqabunga kwaye kunqabile ukuba kubekho iibhore, ngoko ke ukukhathalela umthi kulula kakhulu.
Amanqaku xa ukhulisa imithi yeziqhamo kwigadi yasekhaya
Ukongeza kwizinto ezifana Ukukhetha imithi yeziqhamo efanelekileyo, ubungakanani begadi, wonke umntu kufuneka anikele ingqalelo kwiingongoma ezimbalwa ezingezantsi. Yiyo i:
Ukwazi ukuba yeyiphi imithi yeziqhamo ekufuneka ityalwe kwigadi yakho yasekhaya, kufuneka uqale uqwalasele indawo yegadi yakho yasekhaya ukuze uqiniseke ukuba ukuxinana komthi kwanele ukuba umthi ukhule kwaye ukhule. Okwesibini, sisityalo esilungele umhlaba kunye nemozulu yendawo nganye.
Into yokukhanya yinto ebalulekileyo yokumisela ukukhula kwezityalo. Ingakumbi abo umthi weziqhamo line ityalwe kwigadi yasekhaya. Umthombo wokukhanya uya kunceda isityalo ukuba senze i-photosynthesize ngcono kwaye sikhule ngokukhawuleza. Kufuneka wenze ukucoca okuninzi kwaye wahlule isityalo ngasinye ngokulinganayo. Oku kuya kudala umthombo wokukhanya owaneleyo nofanelekileyo kuhlobo ngalunye lwesityalo.
Okulandelayo, i-drainage factor nayo yinto ekufuneka iqwalaselwe. Kwigadi yasekhaya, into yokuhambisa amanzi kufuneka iqinisekiswe. Wonke umntu kufuneka enze umjelo olungileyo kunye nenkqubo yokuhambisa amanzi. Oku kuya kunceda igadi ingakhukuliseka kwaye ichaphazele igadi ukukhula komthi weziqhamo.
Kwigadi enkulu kwaye eneentlobo ezininzi zemithi, abantu kufuneka bacinge rhoqo ngamasebe kwaye bathene amagqabi. Oku kuya kunceda amaqabunga ahlala e-airy, indawo iya kuba nkulu. Yiphephe imeko eya kuchaphazela isitiya esixineneyo ukukhula komthi.
Ngaphandle koko, xa umthi uvelisa iziqhamo, abantu kufuneka basonge ingxowa ukuze banciphise ukungena kwezinambuzane. Ngokuqinisekileyo musa ukusebenzisa i-pesticides, eya kuchaphazela ngokuthe ngqo ukukhula kwezityalo kunye nempilo yabalimi.
Ixesha lokuthena kufuneka lenziwe ngamaxesha athile. Kuya kwenzeka rhoqo kwiinyanga ezi-6 okanye emva kwexesha ngalinye leziqhamo. Kwizityalo egadini enamagqabi aphantsi, ingqalelo engakumbi kufuneka ihlawulwe ukuququzelela ukhathalelo kunye nokuqokelela.
Ngethemba, ngokwabelana ngokweenkcukacha, ugqibe ukuba yeyiphi imithi yeziqhamo oza kuyityala kwisitiya sakho. Ukuba usenamathandabuzo, nceda uqhagamshelane neengcali okanye umhlobo okhule izityalo zakho ozithandayo kuluhlu olungentla kwaye ukhethe ezifanelekileyo kuwe.
Những điều cần biết khi bón phân cho cây ăn quả | Hatgiongtihon.net